Showing २१-३० of १४८ items.
झापा बिर्तामोड–८ सखरबारीका गणेश कटवालको परिवारमा एकपछि अर्को व्रजपात परेको छ । छोरी सावित्रामाथि परेको शारीरिक पीडाले कटवाल परिवारमा १० वर्षदेखि वज्रपात त परेकै छ । अर्कोतिर १५ धुर जग्गा पनि जग्गाधनीले अर्को व्यक्तिलाई धितो पास गरिदिएको खबरले परिवार विस्थापित हुने खतरा बढेको छ । छोरीको पीडा टालिएकै छैन । अर्को पीडाले ती परिवार विक्षिप्त बनेका छन् । स्थानीय जग्गाधनी प्रेम पोखरेलले कटवाल परिवारलाई चार वर्षअघि अर्थात् २०७२ फागुन २५ गते अढाई लाख रुपैयाँ मूल्य कायम गरी लिखत गरिदिएका थिए । त्यो लिखतअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ सालभित्र पास गर्ने उल्लेख थियो । त्यसलाई बढाएर २०७४ चैत्र मसा
सौन्दर्यको मानक बदलिएको कि बजार ?
यसपटक एक साताभित्र भएका विश्वका दुई ठूला सौन्दर्य प्रतियोगिताको नतिजा अलि फरक देखियो । डिसेम्बर ८मा भएको ६८ औं मिस युनिभर्सको उपाधि दक्षिण अफ्रिकाकी जोजिबिनी तुन्जीले जीतिन् भने डिसेम्बर ८मा भएको ६९औं मिस वल्र्डको उपाधि जमैकाकी टोनी एन सिंहले जितिन् । विश्वका चर्चित दुई ठूला सौन्दर्य प्रतियोगिताको ताज कालो वर्णका सुन्दरीको शिरमा परेपछि सौन्दर्यको मानक बदलिएको हो ? भन्ने चर्चा शुरु भएको छ । सुन्दरता के हो ? अनि सौन्दर्यको मानक के हो ? भन्ने विषयमा विश्व बजारमै पटक पटक बहस हुने गरेको छ । सुन्दरता रूपमा खोज्ने कि गुणमा ? यो आफैंमा विवाद र प्रत्यक्ष बहसको विषय पनि हो । तर, विश्व बजारमा फैलिरहेका स
समाज सुधारका लागि विवेक प्रयोग गरौं
पछिल्लो समयमा वराहक्षेत्र चतरास्थित रामानन्दाचार्य सेवा पीठका मठाधीश कृष्णबहादुर गिरी चर्चामा छन् । गिरीले आफूलाई वेदाचार्य, आयुर्वेदका आचार्य, विद्यावारिधि गरेको, अनन्तश्री, महायोगी सिद्धबाबा, ब्रम्हचारी जगद्गुरु भनेर चिनाउने गरेपनि ‘स्त्री शक्ति’ सँग सामना गर्न अहिले अदालतको फेरोमा घुमिरहेका छन् फनफनी । उनको लीला अपरम्पार छ । हुन त सन्त महन्त, योगी, जगद्गुरु नामपद पाएकाहरूमध्ये भारतमा धेरैजना यस्तै बलात्कार काण्ड, हत्याकाण्डमा संलग्न भएकैले कोही जेलको हावा खाइरहेका छन्, कोही आजीवन कारावासमा पठाइएका छन् । देशविदेशमा करोडौं अनुयायी भएका र अर्बौं रुपैयाँको खजाना लिएर धर्मको सिंहासनम
सांस्कृतिक पर्वको जगेर्ना गरौं
प्रकृतिपूजक किरात जातिले मनाउने पर्व उँधौली शुरु भएको छ । विशेष गरेर चार किरातहरू राई लिम्बू, याख्खा, सुनुवारले यो पर्व विशेष चाडको रूपमा मनाउँदै आएका छन् । यी समुदायले आफ्नो मौलिक चाडको रूपमा मनाउनु सुखद पक्ष हो । खेतबारीमा बीउबिजन लगाएपछि उत्पादन भएको पहिलो चोखो अन्नबाली चढाउने न्वागी उत्सव नै उँधौली उत्सवको रूपमा लिने गरिन्छ । राईहरूले साकेन्वा र लिम्बूहरूले चासोकको रूपमा एउटा सामूहिक रूपमा उत्सव नै मनाउने गरेका छन् । विभिन्न जातजाति धर्म संस्कृति मान्ने नेपालीहरू आआफ्ना समुदायका यस्ता चाडपर्वले सांस्कृतिक रूपमा नेपालीलाई धनी बनाएको छ । आआफ्नो जातिको संस्कार, सांस्कृतिक उत्सवहरू मनाउनु सकार
आफ्ना साथीसङ्गीसँग हातमा स्मार्टफोन बोकेर सेल्फी खिच्ने, रोमाञ्चक उपन्यास, कथा कविता पढ्ने, सुन्दर रमणीय स्थल भ्रमण गर्ने कल्कलाउँदो उमेर हो झापा बिर्तामोड–८ सखरबाडीकी २१ वर्षीया सावित्रा कट्वालको । तर, उनी एकदशकदेखि ओछ्यानबाट चलमलाउन सकेकी छैनन् । एउटै ओच्छ्यानमा एक दशक समय काट्नु कति पीडादायक भएको होला, त्यो सावित्राले मात्र महसुस गरेकी छिन् । नौ वर्षको उमेरमा टाँडेघरबाट झरेपछि टाउकोमा चोट लागेको थियो । तर, टाउकोमा लागेको चोटले विस्तारै कम्मर मुनिको भाग नहल्लिने बनाएपछि उनी अपाङ्ग बनिन् । कक्षा ६ सम्म मुस्किलले पढिन् तर चटपटाउनै नसक्ने भएपछि उनको पढेर ज्ञानी बन्ने सपना सबै तुहियो । उनक
फैलँदो नयाँ शहरको रूपमा इटहरी उदाउँदै छ तर विद्युत सर्ट भएर बर्सेनी आगलागीको चपेटामा पर्नु इटहरीका लागि दुर्भाग्य बनेको छ । इटहरीमा आगलागी हुँदा मुख्य चोक आसपासमै सबैभन्दा बढी विद्युत् सर्ट हुने गरेको वितेका पाँच वर्ष यताको आगलागी घटनाको अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ । शनिबार मध्यराती इटहरीको मुख्य चौकमा रहेको सूर्य कम्प्लेक्समा भीषण आगलागी भयो । बिग बार रेष्टुरेण्टबाट शुरु भएको आगलागीबाट करिब ४ करोडको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व एसपी नरेन्द्र उप्रेतीको घरको चौथो तल्लामा आगलागी हुँदा चार करोड रुपैयाँ बराबरको धनमालको क्षति भएको छ । किरण बुढाथोकीले बिग बार सञ्चालन गर्दै आएका थ
प्रकाशित मितिः मंसिर १९, २०७६